Za ihany dia efa mahavita ny tranoko – Trano 3D
Za ihany no manao ny tranoko
Fananganana trano : ny tokony ataoko mialoha
Manana tany efa vonona hananganana trano ianao ? Nefa tsy hainao hoe inona no tokony atao voalohany ? Marina fa mila manao « permis de construire » fa mialohan’izay ny tokony atao voalohany dia ny mampanao études : plans d’architecture, 3D extérieurs sy devis quantitatif & estimatif … Ireo plans voalaza ireo tsinona no hangalana ny permis de construire ary ny 3D dia ahitana misimisy kokoa ny endrik’ilay trano. Ny devis no ahalalanao izay ho laninao amin’ny fananganana ny trano, na amin’ny fitaovana sy akora na amin’ny fandaniana ara-bola. Mazava ho azy fa tsy afaka ianao no hanao ny plans-n’ny tranonao na manana hevitra tsara tahaka ny inona aza fa mila misafidy matianina toy ny Trano 3D ianao raha te hahazo ny sary rehetra maneho ilay trano tena nofisinao.
Raha za ihany no manao ny tranoko : inona no tombony ?
Mazava ho azy fa misy tombony betsaka amin’ny hoe « za ihany no manangana ny tranoko », ary maro amin’ireto antony manaraka ireto no tena ohatran’ny mitombina :
Mora kokoa ny main d’œuvres
Mahafantatra kokoa momba ny asa mandeha
Mahazo an’ilay fahafinaretana hoe : « za ihany no nanamboatra ny tranoko »
Sady za mahafantatra maçons mahay
Mora mahatoky maçons isika rehefa nanao asa fananganana lehibe izy, ary tsy mahagaga izany satria raha jerena ilay trano sasany niasan’izy ireo dia mety ho tena tsara. Mety tena mahay izy ary mety tsy mahay ihany koa nefa. Fa ny azo antoka nefa, na mahay izy na tsia, dia raha hanangana ny tranonao izy ireo dia tsy hilaza aminao mihitsy hoe : nisy chef de chantier manan-traikefa tsara, conducteur de travaux mahafehy tsara ny asany sy ingénieurs de structure, … tao ambadika tao nampivoaka tsara an’ilay asa. Mazana tsinona ny maçons, na atao ary hoe vita tsara ny asany androany, dia afaka erinandro, 1 volana na erintaona mihitsy aza vao mipoitra ny tsy mampety ny asany : rindrina mitritra, tafo mampiditra rano, rindrina mivilana ary ankoatra izay dia matetika izy ireny dia tsy manaraka ny plans ampanaovinao azy ka mety ahatonga loza ho anao mihitsy aza. Ary eny am-piandohana izy hilaza aminao fa tena mahay ary mahavita fa rehefa tratran’ny olana ianao dia ho lazainy fa ny plans no tsy nety na ny matériaux novidinao. Kanefa tsy misy n’inon’inona azonao atao azy ireo.
Ny fahavoazana, raha za ihany no manao ny tranoko
Ankoatran’ny mety ho fahadisom-panantenanao amin’ny zavatra ho avelan’ny maçon aminao dia misy zavatra maromaro tsy mahafinaritra amin’ny fanangananao manokana ny tranonao :
Ny fotoana lany amin’ny fiantsenana fitaovana sy fanaraha-maso ny asa mandeha
Ny fiasana saina lava momba ny chantier
Ny tsy fahitanao ireo tsy fetezana ara-teknika eo am-pananganana azy
Ny vola lany eny am-pandehanana raha sendra misy zavatra tsy mety nefa efa mitsangana ka tsy maintsy arodana
Ny fahavoazana vokatra ratsy naterakin’ny tsy fahampian’ny fahaizana sy fikajin’ny maçons izay tsy mipoitra raha tsy fotoana maro aty aoriana …
Raha maka orinasa ve nefa tsy lafo be ?
Marina fa mety manan-tombo kely ny maka orinasa hanangana trano. Kanefa raha ato amin’ny Trano 3D manokana dia mahazo antoka ianao fa tsy misy hipika ny tranonao raha izahay no manangana azy voalohany hatramin’ny farany.
Garantie 5 taona tsinona ny trano rehetra atsanganay (clé en main). Izany hoe na inona fahavoazana mahazo an’ilay trano ka noho ny asa nataonay no antony dia amboarinay tanteraka.
Ankoatra ny filaminan-tsaina azonao amin’izay dia tsy voakitikitika ny fotoanao satria izahay no mikarakara ny zava-drehetra ho an’ny fananganana.
Tsy misy zavatra tsy ampoizina fa efa voasoratra mialoha daholo izay asa ho atao.
Mazava ho azy fa raha ny ekipanay no manangana dia misy kalitao voafaritra ao anatin’ny asa vita.
Marina fa mahafinaritra ilay hoe « nanangana ny tranoko aho », ary marina fa tsy ao anatin’ny zavatra mahazatra antsika malagasy ny mampanangana trano orinasa kanefa hafa ihany ny manana antoka fa ho vita tsara ny asanao. Hanatanteraka ny trano nofinofinao, izany no asanay.
Tel : +261349696373
E-mail : contact@trano3d.com
Article précédentLa Vérité sur la construction de maison à Madagascar